मनमौजी नारायण गोपाल ! - Subhay Postमनमौजी नारायण गोपाल ! - Subhay Post
मनमौजी नारायण गोपाल !
सुभाय् संवाददाताDecember 5, 2019 मा प्रकाशित (१ साल अघि) अनुमानित पढ्ने समय : १ मिनेट
उनी बितेको दिन आज । अघिल्लो रात उनले आफैं मरेको सपना देखेकी देखेनन् कुन्नी ? तर उनी सबैलाई भावविह्वल बनाई बिती गए । उनी अर्थात् स्वरसम्राट नारायण गोपाल । नेपाली सुगम संगीतका एक कालजयी शिल्पी, एउटा युग जसका अनगिन्ती गीतहरु आज पर्यन्त जीवित छन् र यो जग रहेसम्म जीवितै रहनेछन् । जीवित छँदा हामीले उनको महत्व सायदै बुझ्यौं र त उनी बरालिँदै बेहोसीमा हराए । नहाँसेरै जीउन मन पराए ।
नयाँ सडकका गल्लीहरुमा उनका अनगिन्ती यादहरु छचल्किएर यत्रतत्र पोखिएको पाइन्छ । उनको जमानाका जेरी-स्वारी पसः र अईला-कचिलाका भट्टीहरुमा उनका दौंतरीहरुले सायद उनको उपस्थितिको आश आज पनि गर्दा हुन् ।
आफ्ना छिमेकीहरुको संगतले सांगीतिक यात्रामा होमिएका उनले त्यस बेलाको नेपाली गीत संगीतको धारलाई नै परिवर्तन गरिदिएका थिए । करिब तीन दशक नेपाली संगीत आकाशमा राज गरेका उनी प्रेमील प्रेमी पनि थिए । त्यस बखत उनले काठमाडौंबाट दार्जिलिङमा माया लाउनेसम्मको आँट गरेका थिए । मायामात्रै होइन, मितेरी साइनो पनि उतैका गोपाल योञ्जनसँग जोडेका थिए । उनै मीत र रत्नशमशेर थापासँगको सहकार्यले उनलाई गीत संगीतको शिखरमा पुर्‍याइदिएको थियो । रत्नशमशेरको शव्दको गहनता, गोपाल योञ्जनको संगीतको माधुर्यता र नारायण गोपालको जादूमयी स्वरको त्रिवेणीमा त्यस बखतको नेपाली सांगीतिक आकाश अबिरल बगेको थियो ।
प्राय सधैं मायापिरतीका गीत गाउने उनले, आफ्नो मायालुको रुपमा दार्जिलिङकी पेमलालाई भित्राए । यसै निहुँमा केही समय उनले परिवारबाट तिरस्कृत पनि हुनु पर्‍यो । जसका कारण उनी केही समय पोखरामा भूपि शेरचनसँग रमाए भने केही समय हेटौंडातिर भीम बिरागसँग पनि बरालिए । यही बरालिने क्रममा पनि यिनले दुवैबाट कालजयी गीत संगीत जन्माए । यसैले त उनी अतुलनीय थिए, अलौकिक थिए ।
उनी अनपेक्षित पनि थिए । धेरै जस्ता उनका सहकर्मीहरु उनीसँग हत्तपत्त घुलमिल हुन हच्किन्थे । यसैले त वर्षौं सँगै बिताएका रत्नशमशेर र गोपाल योञ्जनसँग पनि यिनको ठाकठुक परिरहन्थ्यो । पेमलाले यिनलाई धेरै व्यवस्थित गराएकी भने थिइन्, तर पनि यिनी मनमौजी थिए । परहेज यिनले केहीको गरेनन्, न त साथीभाइको सुने, न त प्रियसीलाई नै टेरे ।
५१ वर्षकै उमेरमा भगवानका प्यारो भएका यिनी अधिक मदिरा सेवनको कारण विभिन्न रोगले ग्रसित थिए । ‘सुखमा पिएँ, दुःखमा पिएँ, पिउँदिन भन्दाभन्दै पिएँ’ भन्ने गीतले यिनको जीवनको वास्तविकता कहन्छ सायद ।
संगीतप्रतिको आशक्तिका कारण भारतमा पनि उनी शास्त्रीय संगीत सिक्न पुगे । यही मेसोमा उनले रत्नशमशेरका गीतहरुलाई उतै आफ्नै संगीतमा रेकर्ड पनि गरे । यी गीतहरुले बिस्तारै नेपाल र भारतमा उनको चर्चा चुलिन थाल्यो । आफ्नो स्वभावअनुसार संगीतको पढाइलाई तिलाञ्जली दिएर उनी नेपाल फर्किए । राष्ट्रिय नाचघर सांस्कृतिक संस्थानमा उनले बिभिन्न ओहदामा जागिर पनि खाए । उनले जागिर खाए अथवा जागिरले उनलाई खायो यो बहसको विषय बन्न सक्छ, तर पनि उनले त्यस बखत सरकारी जागिर खाए ।
त्यस बखत उनले गाएका हरेक गीतका शब्दहरु जादूमयी लाग्दथे । कति बोझिला शब्दहरुले टमक्क मिलेका हुन्थे गीतहरु । सर्जकहरुको सोचले के-केलाई मात्रै छोएको हुँदैनथ्यो । गीतहरु पनि सिद्धहस्त हातहरुले बनेका अमूर्त कलाहरुझैं लाग्दथे । क्षणभरमै माया र मायालुका आँधीबेहरीहरु कहिरहेका हुन्थे भने निमेषभरमै चोटैचोटको व्यथाले घाइते भएकाहरुको दर्द पोखिएका हुन्थे । ‘गल्ती हजार हुन्छन्, यहाँ होस हराएको बेला’, ‘एक्लै तिमी नआउनू म मात्तिएको बेला’ भन्दै अनुरोध गरेको भेटिने उनी फेरि अर्को गीतमा ‘माया गर्नेको चोखो माया पनि देखियो, बाचा गर्नेको बाचाबन्धन पनि देखियो’ भन्दै घुर्काइरहेका भेटिन्थे ।
पिउने संस्कृति र माया गर्ने परम्पराको इतिहास धेरै लामो छ, शायद मानव जातीको उत्पत्तिसँगै यसको शुरुवात भएको हुँदो हो । यसैले संसारका हरेक गीतहरुलाई पूर्णता दिन यसको सहारा लिने गरिन्छ । मिलनमा यही जोडिएको हुन्छ, बिछोडमा पनि यही जोडिएको हुन्छ । उनका लागि पनि यो संस्कृति होस सम्हालेदेखिको साथी बन्यो सायद । न त उनले पिउन छोडे, न त उनलाई यसको नशाले छोड्यो । त्यसैले उनी हरेक साँझ मात्तिन थाले । न मन्दिरको सीमालाई उनले स्वीकारे, न मस्जिदको पर्खालले उनलाई रोक्यो ।
माया गर्ने सवालमा पनि उनले देशको सिमानाका नीति नियमलाई तोडे । जीवनको उत्तरार्द्धमा सम्पूर्ण नेपाली र नेपालले स्वर सम्राटको पगरी गुथिदिए पनि उनको पहिचान र सम्मानमा निकै बिलम्व भइसकेको थियो । र पनि उनी जति बाँचे आफ्नो जिन्दगी बाँचे, आफू भएर बाँचे । आज उनको पुण्य तिथिमा उनलाई हार्दिक सम्झना र श्रद्धाञ्जली सँगसँगै ।
अशोक(courtesy : online khabar)